Wednesday June 19, 2019 - 12:42:09 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xaalad adag oo dhanka ammaanka aha ayaa lagasoo sheegayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kadib markii ay ka dhaceen silsilado dilal ah.
Wararka ka imaanaya Kismaayo ayaa sheegaya in waddooyinka lagusoo daadiyay ciidamo farabadan waxaana xalay markale dhacay fal dil ah oo loo geystay mid kamida saraakiisha ciidamada maamulka isku magacaabay Jubbaland.
Goob joogayaal ayaa sheegay in kulamo iskasoo horjeedo ay ka socdaan Kismaayo, qaar kamid ah musharixiinta utaagan xilka madaxtinimada maamulka 'Jubbaland' ayaa ka walaacsan xaaladooda ammaanka kadib markii habeen hore ladilay Nin oday dhaqameed ah balse ku lug lahaa arrimaha siyaasadda.
Siyaasiyiinta mucaaradka ah ee Kismaayo ku sugan ayaa Axmed Madoobe ku eedeeyay in uu mas'uul ka ahaa dilka Cabdu Qaadir Ibraahim Xasan oo bilihii lasoo dhaafay xiriir wanaagsan lalahaa mas'uuliyiinta dowladda Federaalka Soomaaliya.
24-kii saacadood ee lasoo dhaafay waxaa Kismaayo lagu dilay illaa sedax qof waxaana laba kamid ah falalka dilalka ah lagu eedaynayaa in uu mas'uul ka yahay Axmed Madoobe, arrimahan ayaa imaanaya xilli magaaladu ay laciir ciirayso siyaasiyiin xildoon ah oo dhammaantood kasoo horjeedo maamulka dabadhilifka ah dowladda Kenya.
Weeraro Askar lagu dilay oo ka dhacay deegaanka Baar Sanguuni ee duleedka Kismaayo.